သင့်နှုတ်ခမ်းလေး အလှပေါ် လွင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိချင်တယ်ဆိုရင် -
သင့်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတစ်စုံကို အလှတွေ ပိုမိုပေါ်လွင်ပြီး ပိုမို တောက်ပလာစေဖို့ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးခြင်းကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကဲဒါဆို နှုတ်ခမ်းလှလှလေး တစ်စုံကို ရရှိဖို့အတွက် ဘယ်လိုအချက်တွေ လိုအပ်သလဲ ဆိုတာကို ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါစို့။
၁. လိုက်ဖက် ပါစေ…
သင့်ရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လှပပြီး စွဲဆောင်မှုရှိမဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ ရရှိဖို့အတွက် သင်အသုံးပြုမဲ့ နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝုှိက်မှာ ပုံဖော်မဲ့ ခဲတံရဲ့အရောင်ဟာ အရောင်နှစ်ခု လိုက်ဖက်မှုရှိပြီး တူညီမျှတ ဟာမိုနီကျနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂. မှန်ကန်စွာ စတင်ပါ…
သင့်နှုတ်ခမ်းမှာ နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးတော့မယ်ဆိုရင် ပထမဦးစွာ အပေါ်နှုတ်ခမ်းကနေ စတင် ဆိုးပေးရပါမယ်။ အပြင်ဘက်ကနေ အလယ်ကို ဆွဲယူလာပြီး ဆိုးပါ။ ခဲတံအသုံးပြုချိန်မှာလည်း သင့်နှုတ်ခမ်းသားကို သတိထားပြီး ဆွဲပါ။
သင် နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးတဲ့အခါ ဘေးဘက်ကနေ နှုတ်ခမ်းအလယ်ကို ဆွဲယူ ဆိုးပေးခြင်းအားဖြင့် နှုတ်ခမ်းမှာ အရေးအကြောင်း ဖြစ်ပေါ်မှုကို ဟန့်တားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃. အောက်နှုတ်ခမ်း ဆွဲရင်…
နှုတ်ခမ်းနီဆေးသားကို သင့်အောက်နှုတ်ခမ်းမှာ ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် သတိထားရပါမယ်။ အောက်နှုတ်ခမ်းသားကို ပုံဖော်ချိန်မှာ လက်ငြိမ်ဖို့ကိုတော့ အထူးသတိပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ အောက်နှုတ်ခမ်းသားကို ထူထဲနေအောင် ပုံဖော်လေ့ရှိပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး သင့်နှုတ်ခမ်းသားကို သဘာဝကျကျသာ ပုံဖော်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၄. အစက်ချနည်းနဲ့ ပုံဖော်စို့….
သင့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ပုံဖော်တဲ့အခါမှာ နှုတ်ခမ်းသား ပုံဖော်မဲ့ ခဲတံကို အသုံးပြုတဲ့အခါ တစ်ချက်ထဲ မဆွဲပဲ မိမိလိုချင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းပုံလေးအတိုင်း အစက်ကလေးများကို အရင်ချပြီးမှ အစက်ကလေးတွေကို ပြန်ဆက်ပြီး ဆွဲတာမျိုးက ပိုပြီး ပုံဖော်မှု ပီပြင်ကာ သဘာဝကျစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဆင့်ချင်းဆွဲပီး ပုံဖော်မှုက နှုတ်ခမ်းဘေးတွေကို စွန်းထင်းမှုကင်းဖို့ စိတ်ချရပါတယ်။
၅. ရေစိုတစ်သျှူး သုံးပါ….
သင်နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးပြီးတဲ့အခါ သင့်နှုတ်ခမ်းသားတစ်ဝုှိက်မှာ မလိုအပ်တဲ့ ပေကျံ စွန်းထွက်နေခြင်းတွေကို ရေစိုတစ်သျှူးကလေး အသုံးပြုပြီး ဖယ်ရှားပေးပါ။ သင့်စိတ်ကြိုက် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အရောင်ရင့်တွေကတော့ သင့်နှုတ်ခမ်းကို ပိုမိုစွဲဆောင်မှု ရှိနိုင်တာမို့ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
အရောင်ရင့်နှုတ်ခမ်းနီကို ရွေးချယ် သုံးစွဲပြီးရင်တော့ အပြင်က ပြန်ရောက်တဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းနီကိုဖျက်ဆေးလေးနဲ့ အမြန်ဖျက်ပေးဖို့ကိုတော့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်….. ကဲဒါဆို လှပပြီးစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နှုတ်ခမ်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီလို့…။
သင့္ႏႈတ္ခမ္းေလး အလွေပၚ လြင္ျပီး ဆြဲေဆာင္မွဳ ရိွခ်င္တယ္ဆုိရင္
သင့္ရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းတစ္စုံကို အလွေတြ ပိုမိုေပၚလြင္ၿပီး ပိုမို ေတာက္ပလာေစဖို႔ဆိုရင္ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးျခင္းကို ဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကဲဒါဆို ႏႈတ္ခမ္းလွလွေလး တစ္စုံကို ရရွိဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ လိုအပ္သလဲ ဆိုတာကို ဆက္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါစို႔။
၁. လိုက္ဖက္ ပါေစ…
သင့္ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ လွပၿပီး စြဲေဆာင္မႈရွိမဲ့ ႏႈတ္ခမ္းတစ္စုံ ရရွိဖို႔အတြက္ သင္အသုံးျပဳမဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းတစ္ဝုွိက္မွာ ပုံေဖာ္မဲ့ ခဲတံရဲ႕အေရာင္ဟာ အေရာင္ႏွစ္ခု လိုက္ဖက္မႈရွိၿပီး တူညီမွ်တ ဟာမိုနီက်ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
၂. မွန္ကန္စြာ စတင္ပါ…
သင့္ႏႈတ္ခမ္းမွာ ႏႈတ္ခမ္းနီ ဆိုးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပထမဦးစြာ အေပၚႏႈတ္ခမ္းကေန စတင္ ဆိုးေပးရပါမယ္။ အျပင္ဘက္ကေန အလယ္ကို ဆြဲယူလာၿပီး ဆိုးပါ။ ခဲတံအသုံးျပဳခ်ိန္မွာလည္း သင့္ႏႈတ္ခမ္းသားကို သတိထားၿပီး ဆြဲပါ။
သင္ ႏႈတ္ခမ္းနီ ဆိုးတဲ့အခါ ေဘးဘက္ကေန ႏႈတ္ခမ္းအလယ္ကို ဆြဲယူ ဆိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းမွာ အေရးအေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚမႈကို ဟန႔္တားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၃. ေအာက္ႏႈတ္ခမ္း ဆြဲရင္…
ႏႈတ္ခမ္းနီေဆးသားကို သင့္ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းမွာ ဆြဲေတာ့မယ္ဆိုရင္ သတိထားရပါမယ္။ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းသားကို ပုံေဖာ္ခ်ိန္မွာ လက္ၿငိမ္ဖို႔ကိုေတာ့ အထူးသတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းသားကို ထူထဲေနေအာင္ ပုံေဖာ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆုံး သင့္ႏႈတ္ခမ္းသားကို သဘာဝက်က်သာ ပုံေဖာ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
၄. အစက္ခ်နည္းနဲ႔ ပုံေဖာ္စို႔….
သင့္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြကို ပုံေဖာ္တဲ့အခါမွာ ႏႈတ္ခမ္းသား ပုံေဖာ္မဲ့ ခဲတံကို အသုံးျပဳတဲ့အခါ တစ္ခ်က္ထဲ မဆြဲပဲ မိမိလိုခ်င္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းပုံေလးအတိုင္း အစက္ကေလးမ်ားကို အရင္ခ်ၿပီးမွ အစက္ကေလးေတြကို ျပန္ဆက္ၿပီး ဆြဲတာမ်ိဳးက ပိုၿပီး ပုံေဖာ္မႈ ပီျပင္ကာ သဘာဝက်ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆင့္ခ်င္းဆြဲပီး ပုံေဖာ္မႈက ႏႈတ္ခမ္းေဘးေတြကို စြန္းထင္းမႈကင္းဖို႔ စိတ္ခ်ရပါတယ္။
၅. ေရစိုတစ္သွ်ဴး သုံးပါ….
သင္ႏႈတ္ခမ္းနီ ဆိုးၿပီးတဲ့အခါ သင့္ႏႈတ္ခမ္းသားတစ္ဝုွိက္မွာ မလိုအပ္တဲ့ ေပက်ံ စြန္းထြက္ေနျခင္းေတြကို ေရစိုတစ္သွ်ဴးကေလး အသုံးျပဳၿပီး ဖယ္ရွားေပးပါ။ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ႏႈတ္ခမ္းနီအေရာင္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး အေရာင္ရင့္ေတြကေတာ့ သင့္ႏႈတ္ခမ္းကို ပိုမိုစြဲေဆာင္မႈ ရွိႏိုင္တာမို႔ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။
အေရာင္ရင့္ႏႈတ္ခမ္းနီကို ေ႐ြးခ်ယ္ သုံးစြဲၿပီးရင္ေတာ့ အျပင္က ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ႏႈတ္ခမ္းနီကိုဖ်က္ေဆးေလးနဲ႔ အျမန္ဖ်က္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ မေမ့လိုက္ပါနဲ႔ေနာ္….. ကဲဒါဆို လွပၿပီးစြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းအလွကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါၿပီလို႔…။
Total Hits : 452253